ताजा समाचार – Page 61 – सप्तरंगी एफ एम
Home / ताजा समाचार (page 61)
दमकमा रथ यात्राको तयारी तिव्र
सप्तरङ्गी एफ.एम. दमक/भदौ ४/ श्री कृष्ण जन्माष्टमीको उपलक्षमा बिगतका बर्षहरु देखी दमकमा निकालीदै आएको रथ यात्रालाई यस बर्षको लागि पनि तयारी तिब्र पारिएको छ । आगामी भदौ १८ गते निकालीने रथ यात्राको लागी बिभिन्न उप समितिहरु निर्माण गरी तयारी तिब्र बनाईएको रथ यात्रा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मानबहादुर बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो । रथ यात्रामा भक्तजनहरुको उपस्थिति बृहत बनाउन प्रचार प्रसारको कामलाई ...
दमक पब्लिक लाईब्रेरी देशै भरी विस्तार हुँदै
सप्तरङ्गी एफ.एम. दमक/भदौ ४/ सात बर्ष अघि दमकमा स्थापना भएको दमक पब्लिक लाईब्रेरीले बिभिन्न ठाउँमा आफ्ना शाखाहरु बिस्तार गर्ने भएको छ । लाईब्रेरीलाई देशै भरी पु¥याउने योजना अनुसार यो बर्ष झापा र मोरङका गरि तिन ठाउँमा शाखा बिस्तार गर्ने योजना रहेको दमक पब्लिक लाईब्रेरीका अध्यक्ष भेषराज न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । झापाको बिर्तामोड, सुरुङ्गा र मोरंगको बेलबारीमा यो बर्ष भित्रमा शाखा ...
मुगाधन कृष्णकुमारी राई स्मृती प्रतिष्ठानद्वारा जेष्ठ नागरिकलाई फलफुल वितरण
सप्तरङ्गी एफ.एम. दमक/भदौ ४/ प्रजातन्त्रका सेनानी स्वर्गिय मुगाधन राई र उहाँकी धर्म पत्नी स्वर्गिय कृष्णकुमारी राईको नामा स्थापना गरिएको मुगाधन–कृष्णकुमारी राई स्मृति प्रतिष्ठानले आज दमकका ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई फलफूल वितरण गरेको छ । दमक–५ स्थित ज्येष्ठ नागरिक सम्मान प्रतिष्ठानको सभाहलमा एक कार्यक्रम गरि त्यहाँका सय बढी ज्येष्ठहरुलाई सामूहिक रुपमा फलपूmल वितरण गरेको हो । आप्mना दिवंगत आमा कृष्णकुमारीको स्मृतिमा ज्येष्ठहरुको दिर्घ ...
नगरपालीकाले बिद्यालयमा राजनिति घुसाउँदा हिमाविमा हिँजोको घटना भएको दमकका शैक्षिक अगुवाको आरोप
सप्तरङ्गी एफ.एम. दमक/भदौ २/ दमक २ मा रहेको हिमालय माध्यमिक बिद्यालयमा हिँजो भएको घटनालाई दमकका शैक्षिक अगुवाहरुले दुर्भाग्य पुर्ण भनेका छन् । दमक नगरपालीकाले विवेक नपु¥याउँदा बिद्यालय जस्तो ठाउँमा बिबाद उत्पन्न भएको दमकका शैक्षिक अगुवाहरुको निश्कर्ष रहेको छ । नगरपालीकाले शिक्षा नियमावली जारी गरे देखीनै चौतर्पिm बिरोध हुँदै आएको र पछिल्लो समयमा अदालतमा पुगेको बिषयमा नगरपालीकाले बल जप्mती गर्न खोज्दा ...
झापाको कचनकवलमा दक्षिणी क्षेत्रमै पहिलोपटक बृहत लाखे नाच तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमको उद्घाटन
सप्तरंगी एफएम / कचनकवल ०१ भदौ २०७५ झापाको सुदुर दक्षिणी गाउँपालिका कचनकवलमा शुक्रबार दक्षिणी क्षेत्रमै पहिलोपटक बृहत लाखे नाच तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमको उद्घाटन गरीएकॊ छ l नेवा:देय:दबु: र जनजाती नेवार समाज कचनकवलको आयोजनामा शुरु भएको कार्यक्रमको उद्घाटन कचनकवल स्थित बिभीन्न संघ संस्थाका प्रमुखहरु र राजनितीक दलका प्रतिनिधीहरुले सम्युक्त रुपमा गरेका हुन् l आगामी श्रीकृष्ण जन्माष्टमीसम्म कचनकवलका ...
दमकमा श्रीकृष्ण रथ यात्रा भव्य बनाउने बिषयमा छलफल
सप्तरङ्गी एफ.एम. दमक/भदौ १/ आगामी भदौ १८ गते दमकमा निकालीने श्री कृष्ण रथ यात्राको बिषयमा आज बृहद छलफल गरिएको छ । स्थानिय राधा माधव समितिको भवनमा बिभिन्न क्षेत्रका अगुवाहरुको भेलाले रथ यात्रालाई भव्य बनाउने निर्णय गरेको रथ यात्रा समितिका सचिव प्रेम भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रममा दमक नगर प्रमुख रोमनाथ ओलीले रथ यात्रामा सबै धर्म सम्प्रदायका मानिशहरुलाई समेटेर साझा बनाउनु ...
आफुलाई धोका दिन लागेको भन्दै मोरंगमा एक युवतिको विभत्स हत्या
सप्तरङ्गी एफ.एम. दमक भदौ १ मोरङको ग्रामथानमा एक युवतीको हत्या भएको छ । ग्रामथान गाउँपालिका –३, सिद्राहामा दिनेश भट्टराईले शिखा घिमिरेलाई धारिलो हतियार प्रहार गरी हत्या गरेका हुन । हत्यापछि भाग्दै गरेका दिनेशलाई स्थानीयले प्रहरीलाई बुझाएका छन् । नियन्त्रणमा लिने क्रममा उनैले बोकेको छुरीले उनकै हातमा लागेर सानो चोट लागेको प्रहरीले जनाएको छ । विराटनगर १३ घर भएका उनीहरुबीच आज ...
हिमावि दमकको अभिभावक भेला बिथोलीयो , आफ्नो अध्यक्ष आँपैंmले चुन्न पाउनु पर्ने अभिभावकको माग
सप्तरङ्गी एफ.एम. दमक/भदौ १/ दमक २ मा रहेको हिमालय माध्यमिक बिद्यालयको आज बोलाईएको अभिभावक भेला बिथोलीएको छ । दमक नगरपालीकाले बनाएको नगरशिक्षा नियमावलीमा बिद्यालयका अभिभावकले आफ्नो अध्यक्ष चुन्न नपाउने नियम बनाएको बिरोधमा कांग्रेसले अभिभावक भेला बिथोलेको हो । शिक्षा नियमावली सार्वजनिक हुनासाथ बिरोध गरेको कांग्रेसले हिँजो नगरपालीकामै पुगेर नियमावली जलाउनुका साथै बोलाईएको अभिभावक भेला स्थागित नगरे बिथोल्ने चेतावनी दिएको थियो ...
सामुदायिक प्रहरी दमकद्धारा परिचयात्मकसहित अन्तरकृया
सप्तरङ्गी एफ.एम. दमक/साउन ३१/ सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रले आज इलाका प्रहरी कार्यालय दमकमा भर्खरै आउनुभएका डिएसपी श्यामल सुब्बासंग परिचयात्मकसहित अन्तरकृया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । प्रहरी परिषरमा भएको सो कार्यक्रममा सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रका पदाधिकारी, सदस्यहरुको उपस्थिति रहेको थियो । केन्द्रका अध्यक्ष रोशनकुमार गौतमका अनुसार भर्खरै सरुवा भएर आउनुभएका डिएसपी सुब्बासहित प्रहरी निरिक्षकद्धय खगेन्द्र एक्तेन र सन्तोष राईसंग प्रहरी सेवा ...
गुरुकुलका बटुकले धान्दै नाग पञ्चमी पर्व
सप्तरङ्गी एफ.एम. दमक/साउन ३१/ आज नाग पञ्चमी नागको पुजा गरी मनाईएको छ । पछिल्लो समय आधुनिकताले गर्दा नाग टांस्ने प्रथा भने कम हुँदै गएको छ । ब्राम्हण पुरोहीतहरुले घर घरमा गएर नाग टांस्ने प्रचलन अहिले त्यति देखिन छाडेको छ । तर पछिल्लो समय बिभिन्न ठाउँमा रहेका गुरुकुलमा अध्ययनरत बटुकहरुले नाग टाँस्ने परम्परालाई धान्दै आएका छन् । आज दिनभर कमल र ...